ပအိုဝ်းဘာသာစကား - ဝီကီပီးဒီးယား
၁.၈ သန်း (၂၀၁၄)
ပအိုဝ်းဘာသာစကား သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပအိုဝ်းလူမျိုး ၁ သန်းကျော်ခန့် ပြောဆိုအသုံးပြုကြသော ကရင်ဘာသာစကားအုပ်စုဝင် ဘာသာစကားတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဒေသိယစကားများမှာ တောင်ပိုင်းပအိုဝ်းနှင့် မြောက်ပိုင်းပအိုဝ်း တို့ ဖြစ်ကြသည်။
Ethnologue တွင် Black Karen, Northern Taungthu, Taungsu, Pa Oh, Pa-O, Pa’o Karen, Pa-U ဟူ၍ အမည်ကွဲများကို ဖော်ပြထားသည်။
ပအိုဝ်းဘာသာစကားကို "Black Karen" (ကရင်နက်) ဟူ၍ ကရင်နီ နှင့် ကရင်ဖြူ (စကောကရင်) တို့၏ ဆန့်ကျင်ဖက်အမည်အဖြစ် ကိုလိုနီခေတ်အချိန်က ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသော်လည်း တောင်သူ (ပအိုဝ်း) တို့က ယင်းတို့အား ကရင် အမည်ဝေါဟာရဖြင့် ရည်ညွှန်းခြင်းကို လက်မခံကြပေ။Ethnologue တွင် ပအိုဝ်းဘာသာစကားကို "Black Karen" ၏ အတိုကောက် "BLK" ဖြင့် ကဏ္ဍခွဲထားသည်။
ရှမ်းပြည်နယ် အနောက်တောင်ပိုင်းရှိ တောင်ကြီးမြို့ပေါ်၊ အနီးဝန်းကျင်ရှိ မြို့နယ်များနှင့် ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှိ တောင်ငူမြို့ ထန်းတပင်မြို့ အနီးဝန်းကျင်
ပအိုဝ်းဘာသာစကားကို မြန်မာအက္ခရာကို အခြေခံသော ပအိုဝ်းစာပေဖြင့်ရေးသားကြသည်။ စာပေအားဖြင့် တောင်ပေါ်ပအိုဝ်းလူမျိုးသုံး ထီသိမ်စာပေ ခေါ် တောင်ကြီးစာမူ နှင့် မြေပြန့်ဒေသနေပအိုဝ်းလူမျိုးသုံး အလံတရာစာပေ ခေါ် သထုံစာမူ ဟူ၍ မူကွဲနှစ်မျိုးရှိသည်။
↑ ပအိုဝ်း at Ethnologue (18th ed., 2015)
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Pa'o Karen"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
↑ Shintani Tadahiko. 2015. The Kadaw language. Linguistic survey of Tay cultural area (LSTCA) no. 106. Tokyo: Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA).
↑ Sir George Scott. Among the Hill Tribes of Burma – An Ethnological Thicket. National Geographic Magazine, 1922, p. 293
↑ Accurate as of Feb. 2013, cf. http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=blk
ဤ တရုတ်-တိဗက်နွယ် ဘာသာစကားများ နှင့် ဆက်စပ်သော ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပအိုဝ်းဘာသာစကား&oldid=742318" မှ ရယူရန်
တရုတ်-တိဗက်နွယ် ဘာသာစကား ဆောင်းပါးတိုများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂ မေ ၂၀၂၂၊ ၀၄:၀၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။